BusyBox (No Root Donate) v3.35 Apk - Min Oaker
Android app BusyBox (No Root Donate) v3.35 Apk
BusyBox (No Root Donate) v3.35 Apk
by ပုသိမ်နည်းပညာ on 3:20 AM in Android app
BusyBox App လေးဗားရှင်းအသစ်ထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် (ပုသိမ်အိုင်တီ)
AndroidUser ​တွေအတွက်​ အသုံးဝင်​လိုအပ်​မှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။System based ​တွေ binary ​တွေလုပ်​နိုင်​ဖို့၊socure code ​တွေ​ရေး​ပေးနိုင်​ဖို့၊Rooted ရပြီးမှအသုံးပြုလို့ ရ​စေတဲ့application​တွေကို modification လုပ်​​ပေးနိုင်​ဖို့၊open source ​တွေဖွင့်​နိုင်​ဖို့၊applications ​တွေကို Fixed ဖြစ်​နိုင်​​စေဖို့၊
rooted application​တွေပြည့်​ပြည့်​ဝဝ Run နိုင်​ဖို့၊စတဲ့​နေရာမျိုး​တွေမှာPowerful Command လုပ်​​ဆောင်​​ပေးနိုင်​တာကို​တွေ့ရပါတယ်​-
UNIX Command Tools များစွာကိုအသုံးပြု
ဆိုလိုချင်တာကတော့ Android OS ရဲ့ System File တွေကို ကိုယ်ကြိုက်သလိုပြောင်းချင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အခုပြောတဲ့ BusyBox ကနေတစ်ဆင့် Commands တွေသုံးပြီးပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။
system storageကိုလည်းfree space အနည်းငယ်ထပ်တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ-2Line for viberလိုမျိုးapkတွေဆိုရင်
– In Terminal Emulator -> Preferences -> Initial command: “export PATH=$PATH:/data/data/burrows.apps.busybox.paid/app_busybox/; export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/data/data/burrows.apps.busybox.paid/app_busybox/”
– Internet: Download BusyBox binaries
– Script: Add $PATH to Terminal
– Clear your APP DATA and RE-INSTALL BusyBox!
– Make sure to copy the $PATH for the Terminal Emulator!
By ပုသိမ်နည်းပညာ at 3:20 AM